Ungavusa kanjani ngokomoya - AFRIKHEPRI
Indlela yokuvusa ngokomoya
UWhitney: Ilungelo Lokuba Yimi - Imibhalo (2018)
ilanga, july 12, 2020
I-11 min ifundwe
LLapho sifika ezweni, ngesikhathi sokuzalwa kwethu, kubekwa umgubuzelo wokuqothuka, ukuze singabe sisazi izimpilo zethu zangaphambili, nokuthi yini eyasiholela lapha; wonke umdlalo wokuphila ukuvuka, ukukhumbula ukuthi kungani siphila, ukukhula emoyeni nangothando, nokuthi siyini, okungukuthi ukusho imimoya esemizimbeni yenyama negazi ehambisana nomphefumlo wethu okuyi ibhokisi elimnyama ngubani orekhoda zonke izenzo zethu ezinhle nokubi kuzo zonke izimpilo zethu lapha.
Inkinga ephambi kwethu ukuthi sizitholele thina, sisodwa, sifuna umdlalo wempilo, indlela ezosiholela ekuvukeni, abanye babe nenhlanhla yokuzalwa benamakhono anjengokuthi Bafika ngokushesha okukhulu, kepha isibalo esikhulu kunazo zonke sikufiphele ngokuphelele, ngakho-ke kungenziwa kanjani?
Ukuzivocavoca kunzima kakhulu njengoba umuntu esesimweni sezinkinga ezinkulu uma umuntu engakholelwa kumdali, imfuneko ebalulekile, nokuthi umuntu acabanga ukuthi konke kuvunyelwe nokuthi Impilo ingumthetho wehlathi, ngakho-ke lelo elinamandla.
Ukusuka lapho konke kuvunyelwe futhi ukuvuswa kumele kwenziwe uma kwenzeka ngaphambi 'kokubuyela' ezweni lomoya (ekufeni) ngokushaqeka kwangempela kukagesi; imvamisa kuba ngumcimbi obuhlungu, obuhlungu kakhulu (ukushonelwa umuntu omthandayo, noma umsebenzi wakhe…) ukuphoqa olahlekile ukuba azibuze, “alulame” ngokucabanga, okungamholela ukukhumbula umoya wakhe.
Kulabo abangenakho lokhu kukhubazeka futhi ukungabaza ubukhona boMdali akungabazeki, umbuzo uhlala: kanjani ukuvuka, kufanele silandele okunjalo futhi i-guru enjalo, umbuthano onjalo?
Emhlabeni lapho "uhlelo lwenkanyezi" lukwakhiwe ngemodi, lesi isilingo esilula kakhulu; Kulezi zinsuku iningi labo liphupha ngehora labo lenkazimulo, wonke umuntu ufuna ukudonsa isembozo kuye ngokwakhe ukuze aqashelwe abanye, ukuba inkanyezi nokuthi zonke izindlela zinhle, ukuzigcina emangeni ukuze zilawule kangcono futhi ulondoloze ukwenyuka esinakho ngaphezulu kwabo, ngakho-ke bayakukholwa konke okushiwo kubo.
Wonke umuntu uphupha ukuthi adume, ngubani ngokuqhubeka TV, ngubani ngokubulala, ubani ngokuntshontsha, ngubani ngokwenza ejele… Ngokuvamile iqiniso lokuthi yilabo abangakaphaphami emoyeni; ayinempilo, kepha ingaphezu kokungazi.
Ngakolunye uhlangothi, abaningi yilabo abaye baqonda umthetho wothando, baphapheme futhi bavulelwa kubo amakhono athile, okuyilapho kudingeka, ngaphansi koMthetho wothando, ukuhlanganyela nabanye kepha abawusebenzisayo kunalokho, ukubeka abanye amandla abo, intando yabo, noma ngenhloso yokukhipha imali noma enye inzuzo yezinto ezibonakalayo, noma ngenhloso yenjabulo yokubusa, imikhuba eminingi kangaka ephambana noMthetho uthando.
Lokhu kusolwa ikakhulukazi ngoba ukwephula uMthetho wothando kanye nenqubo yawo yokwethembeka kukho konke ukuhlupheka, lokhu kwenzeka kubaholi abaningi benkolo futhi abangokomoya namuhla.
Ngempela, kuyilapho lowo ukwazi kumele ngixhumane nabanye ngokwazi mahhala futhi ngaphandle kokwehlukanisa, futhi ngaphezu kwalokho ngithatha leli thuba lapha ukwenza i-pea mepa kuqhathaniswa nendlela yokuthandaza engizoyiveza kulo mbhalo ngokuthi ngiyinike yona abanye eceleni, lapho kufanele ngabe ngikwenzele wonke umuntu, bakhetha ukuzigcinela bona, futhi ngazo zonke izindlela, lokho abakwaziyo ukuze abanye bahlale bengazi futhi babambe ngamandla abo!
Ukuvuka emoyeni kungukuqalwa, kuyini ukuqala? Ukuqalisa ukuvula ukuvula ulwazi, ukuthi zonke lezi zinto: ungubani wena nabanye, wenzani lapha ngezansi, yiziphi izikhali ezingokomoya okufanele ukwenze?
Ukuphendula yonke le mibuzo, ukuze uqalise, kunezindlela eziyinkulungwane: ungathola incwadi noma umbhalo okhuluma nawe, okukubangela ukuthi “uchofoze” noma usebenze “njengesihluthulelo”, ungahlangana nothile 'umuntu okukwenza ube nemiphumela efanayo, noma ulandele uhlelo lwethelevishini, noma uwe engxoxweni engakukhathazi ekuqaleni kunoma iyiphi indawo (emsebenzini, emgwaqweni, esitimeleni, metro ... ) futhi ube nomphumela ofanayo kuwe…
Kepha okuphikisayo kusho, ngoba kuncike kuwe kuphela, akukudaleli ukuncika kuwe futhi akunikezi ubungozi noma ukuphazamiseka ngumkhuleko; Ngempela, ubuphi ubungozi bokuthandaza uma umuntu ehlasela futhi azi ukuthi angamcela kanjani uMdali wakho konke nokuthi lowo ukusho ngokusobala ekuqaleni komthandazo wakhe?
Yebo kubalulekile lapho sicela ukuthi sikhumbuze isikhathi ngasinye ukuthi sikhuluma nobani ukuze kungabizi izinhlangano ezingenampilo!
Ngakho-ke, umthandazo uyisihluthulelo sokuvusa emoyeni.
Kodwa-ke, kufanele kwenziwe ngokuvumelana nenqubo engenaphutha equkethe izinyathelo ezintathu: okokuqala kungukuhlanzwa kwangaphakathi ngesicelo sokuthethelelwa, okwesibili yilokho okubonga ngakho konke okuhle okuye kwafezwa phakathi kwakho Ngesikhathi sokugcina uthandaza futhi uma usenza futhi, isinyathelo sokugcina singukukhalaza noma ukucela kuMdali nobaba.
Le ndlela iyonke, kepha kulesisigaba ngasinye imithetho kumele iphinde ibonwe.
1) Isicelo sokuxolelwa (bona "isicelo sokuxolelwa nge-Aquarian Age")
Umkhuleko namaKongo, ngithatha lesi sibonelo ngoba ngingomunye, ngihlala ngiqala ngama-bravos amathathu (makunkus) ahlukaniswe imizuzwana embalwa ukuyobonisa uMdali namadlozi ukuthi sesiqala!
Ukucela intethelelo kuMdali wazo zonke izinto esidinga ukuziphilisa nothando okufanele sikubone ukwehluleka emthethweni wothando esikhathini lapho ngesinye isikhathi phakathi nesikhathi esicela intethelelo ngakho kuMdali ukuthi kumele senze lesi sicelo ngoba singalehluleka kuphela kulowo esimkweleta yena nokuphila nothando, kanye nomthetho ohambisana nawo!
Ukucela intethelelo ukuzihlanza, okusho ukuthi uzihlanze ngaphakathi, kodwa futhi nokuzikhanyisela nokuzakhela ukuthula ngaphakathi, kepha ukuze uthole umphumela, kusadingeka ukuthi ukwenze ezindizeni ezimbili eziphindwe kabili:
a) Cela intethelelo kuMdali ngomonakalo esingase siwenze kwabanye ngomcabango, ngezwi, ngezenzo, ngendlela engazi futhi engazi lutho ngayo yonke inkathi umuntu acela kuyo; okokuqala esizicelayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube lusuku esikwenza ngalo, lapho-ke, ngazo zonke izikhathi ezilandelwayo nezinsuku nosuku, sicela kusukela umzuzwana (ngokwesibonelo ekuseni) kuze kube komunye (ngokwesibonelo kusihlwa) kodwa nathi sicela ukulimala esenze kithi !
Yebo, sicela intethelelo futhi ngomubi esiwenzile, ngendlela efanayo nakwabanye, ngoba akukho ukuthula uma sizikhohlwa kuleli zinga!
b) Nika ukuthethelelwa, ngakho-ke thethelela abanye lokho okungenze basenzele kona phakathi nenkathi efanayo naleso se-a): kusukela ekuzalweni okokuqala, bese kusuka kwesinye isikhathi kuye kwesinye sosuku olulandelayo ngemuva.
Ukunikeza intethelelo, ngakho-ke ngokuthethelela abanye, kusho ngokusobala ngokuzwakalayo noma ngokujulile “phambi kwakho Nzambia Mpungu (leli igama loMdali eKikongo), kuya ngegama olinike lona, ​​ngiyalixolela abanye bonke ububi okungenzeka bangenzele kona ngazo zonke izindlela ezingabakhona, engikwaziyo noma cha kusukela ngizalwa (okokuqala) kuze kube namuhla futhi, ezinsukwini ezilandelayo, kusukela kuleso sikhathi (ngokwesibonelo ekuseni) kuze kube kwenye (kusihlwa ngokwesibonelo) ”.
Ukunikeza intethelelo kusho futhi ukumemezela ngokuzithoba phambi koMdali ukuthi sikunikeza futhi futhi uzithethelele yenangilandela leyo ndlela efanayo esetshenziselwa ukuthethelela abanye, ngakhoke: “phambi kwakho Nzambia Mpungu, nami ngiyazithethelela ngawo wonke umonakalo engiye ngawenza kuzo zonke izindlela okungenzeka ngazo uyazi noma cha kusukela ekuzalweni kwami ​​(okokuqala) kuze kube namuhla futhi, ngosuku ngalunye ngemuva, kusukela kuleyo nkathi (ngokwesibonelo ekuseni) kuze kube njalo kwenye (kusihlwa ngokwesibonelo).
Uma lezi zinyathelo ezimbili zenziwe ngokusobala, ungazibheka 'umsulwa' ngaleso sikhathi futhi lokhu kuhlala kuze kube ukwephulwa kwakho okulandelayo koMthetho wothando!
Uma ngabe lezi zincazelo azibonakali zicace ngokwanele kuwe, bhekisisa i-athikili yami "esicelweni sokuxolelwa ku-Age of Aquarius".
Kunoma yikuphi, njengoba uhlanzekile ngaphakathi, kungcolile, ungabonga ngazo zonke izinzuzo ezenzelwe wena.
Yilokho ungabongi kuphela uMdali kepha futhi nabo bonke labo abamsizayo ukuthi afeze izicelo zethu ezingezansi, lokho kusho konke okhokho enyukela, bonke labo abaphenduke oKhristu noma abakhanyiselwe, kunenombolo ethile yabo ebuntwini futhi lapho wonke umuntu kufanele acaphune nalawo ahambelana nesiko lokhokho bakhe futhi labo kuphela.
Ngokuqondile ukuthi ungayibona kanjani ukhokho ophakanyisiwe, ukhanyisiwe, noma okusezingeni eliphezulu kuKristu ?
Empeleni ngumuntu ozibonakalisile ngendlela eyingqayizivele yothando, okuzobe kumholele ezenzweni ezingalibaleki maqondana nabanye, onikele impilo yakhe kwabanye (ngisho nase isilinganiso esincane, hhayi esomhlaba jikelele, esingachazanga gazi, ngaphandle kokukhetha okukhulu kakhulu, kepha iningi akumele lichithe noma libe yimbangela yokufa kwabanye!
Uma usuthole, lokhu kusho ukuthi uma elimnyama, ayohlanganisa okhokho abamnyama njengoba Kimbangu Matsua, Bueta Mbongo, Biayenda, Toko, Kimpa Mvita, mama Mafuta, mama Ngunga, mama Mwilu, mama Anuarite ...
Uma nje sesazi la madlozi ukuthi sanquma ukusicaphuna emithandazweni yakhe yokubonga kepha nangezikhalazo, ngasikhathi sinye njengoMdali, kuzofanela siwacaphune ngemuva kokunxusa uMdali hhayi nje kuphela ekubongeni esigabeni sezikhalazo, kungani?
Ngoba uma umuntu esefikelwa ukukhuphuka noma ukukhanyiselwa, uba “unkulunkulu” njengoba evunyelwe ukugqoka kuKristu, lo ubukhulu boMdali obuhloselwe bobabili kulabo abangaphezulu kuka uthando nokufundisa ubuntu ngendlela yothando noma uKimuntu (bona “kukhona imvelo emnyama noma emhlophe ngokomoya?”).
Kungalo mqondo ukuthi abaningi bakhuluma ngonkulunkulu hhayi bakaNkulunkulu kuphela, kusho ukuthi labo abakhuliselwe kuleli banga banelungelo lokudluliswa noma, okungcono kakhulu, banelungelo ukuvela "kuhulumeni" woMdali ukuphendula izicelo ezivela ngezansi ezihamba ngendlela yothando futhi, ngakho-ke, ziyafanela!
Ngakho-ke emthandazweni wami kimi eCongo, ngifanele ngithi:
“Ngibonga uNzambia Mpungu (leli igama loMdali ku-kikongo) ngayo yonke imihlomulo ongenzele yona kusukela ngizalwa (ngomkhuleko wokuqala) kuze kube namuhla futhi ngibonga nawokhokho bami, tatas Matsua, Kimbangu, Bueta Mbongo, Bi ukuhamba, mamas Mafuta, Kimpa, Ngunga, Mwilu and all abanye for that ".
Ngemuva kwalokho usuku nosuku, kufanele uveze ukubonga kwakho kusuka esikhathini esithile (ngokwesibonelo ekuseni) uye kwesinye (kusihlwa ngokwesibonelo): “Ngiyabonga Nzambia Mpungu ngalo lonke usizo ongaluthola kimi kusukela ekuseni kuze kube kulobubusuku noma kusukela izolo kusihlwa kuze kube namhlanje ekuseni futhi ngibonga nawokhokho bami ama-tattoo… kanye nama-mamas..ngakho konke okunye lokho! ”.
Uma nje sibongelwe kuMdali nakokhokho abakhethwe amagama abo ngoba sazi umlando wabo uqobo futhi umphumela uthembele kubo, singadlulela esigabeni sezikhalazo noma izicelo.
3) Izikhalazo noma izicelo emthandazweni
Lapha futhi izikhalazo noma izicelo zibhekiswe kubo bobabili uMdali namadlozi, ngiyabonga, kepha lapha kufanele sikhumbule umthetho omkhulu: isikhalazo njalo, bese kulandela esinye ngemuva.
Ngesinye isikhathi nasi isibonelo:
Kimi Kongo, izicelo zami zibhekiswe kwaNzambia Mpungu (nguMdali ngesiKakongo) futhi nakokhokho abakhanyiselwe uKongo, ngakhoke: “Nzambia Mpungu Tibela wa vanga zulu ye ntoto (uSomandla uNkulunkulu uMdali wezulu nomhlaba) , Ngicela ungisize ngivuke emoyeni, okungukuthi ngizivulele ithuba, futhi ngicela into efanayo kokhokho bami ama-tatas… nama-mames… nakuwo wonke abanye ”bese ngigcina ngo“ Nge ta ”(makube njalo!) noma“ E nkassukulu, E tia! ” noma “uNowa wa bonga, wa sa!”, okusho into efanayo!
Ngilandela lesi sicelo sesibili: “Nzambia Mpungu Thamba wa vanga zulu ye ntoto (noma nje Nzambia Mpungu) ngiyanicela ukuthi ningenze ngithole amandla omoya akimi ngokuwavusa, nami ngicela into efanayo kimi amadlozi ama-tatma… kanye nama-mam… kanye nabo bonke abanye! “Nge ta” ukuqeda noma “E nkassukulu, E tia” noma “uNkulunkulu wa bonga, wa sa!”.
Bese ngiqhubeka kolwesithathu: “Nzambia Mpungu, ngiyakucela futhi ukuthi ungazise ukuthi ngilapha, okungukuthi ukusho ukuthunywa kwami ​​emhlabeni, ngicela nezikhokho zami ama-tattoo afanayo. .nina omama..ukuthi kubo bonke abanye, uNge ta (noma…) ”
Uma nginesinye isicelo, ngiyakha ngokwazisa ngayo kuMdali nokhokho, uma kungenjalo, ngiphetha ngomkhuleko wami wokuthakasa amahlandla amasekhondi ambalwa ngaphandle komunye nomunye ukusho ukuthi sengiphelile!
Kungathatha isikhathi eside ukufunda, kepha hhayi isikhathi eside ukuzijwayeza, ngoba ukuthatha imizuzu emihlanu kuya kwelishumi kuphela imizuzu emihlanu noma eyishumi usuku ngalunye futhi yini ongazama ukuyenza uma usuvele ukholelwa kuMdali?
Iseluleko sokugcina, thandaza okungenani ekuseni, ukuba ube nokuthula kwengqondo usuku lonke futhi kusihlwa ulale ngoxolo, kepha akunqunyelwe ukukwenza nganoma yisiphi isikhathi ngokushesha nje lapho uzizwa. isidingo!
par ULuzolo Menga Ma Kongo
Ukubhujiswa Kwezizwe - U-Alice Bailey (PDF)